Kheyraadka Bukaanka - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Kheyraadka Bukaanka - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Waxaan ka badanahay koox daryeel. Waxaan nahay koox that xannaaneysaa, isku xira, oo iskaashi sameysa.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay iskaashi la sameysaa Barnaamijka Kalkaalinta Kulliyadaha Bulshada ee Harrisburg ee Degmooyinka New Holland Avenue si aan u siino waxbarasho bukaanka lacag la’aan ah oo ku saabsan mowduucyo / xaalado caafimaad oo badan. Ardayda kalkaalinta caafimaadku waxay la wadaagaan bukaanka si ay u horumariyaan caadooyin caafimaad qaba si ay ula kulmaan himilooyinka caafimaad ee qof walba.
Taageerada Shaqada Bulshada
Shaqaalahayaga Bulshadu waxay bukaannada ku xiraan ilaha looga baahan yahay in lagu taageero caafimaadka oo dhan, Oo ay ku jiraan:
Maareynta daryeelka kalkaalisada
Caawinta qaxootiga iyo soogalootiga
Ku xirida adeegyada taageerada bulshada
U doodista bukaanka
Caawinta isqorista caymiska
Isuduwidda daryeelka ayaa u adeegta sidii qayb ka mid ah kooxahayada daryeelka si ay uga caawiso bukaannada inay fahmaan oo ay u maareeyaan xaaladooda caafimaad. Isku-duwayaasha daryeelka ayaa diyaar u ah inay kaa taageeraan:
Dib u eegista daawada
Caawinta iskuduwida daryeelka takhasuska ah iyo baahiyaha kale ee daryeelka
U gudubka maaraynta daryeelka
Qorsheynta daryeelka sare
Goobaha Caafimaadka ayaa bixiya daryeel shaqsiyeed, waxbarasho kooxeed, iyo taageero facooda bukaan socodka la soo gudboonaada baaritaan la mid ah. Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa xiisado kooxeed ah waalidiinta uurka leh, waalidiinta cusub iyo carruurtooda, maaraynta sonkorowga, iyo inbadan!
Wixii macluumaad dheeri ah ama jadwalka kalfadhiga Fayoqabka, fadlan la xiriir Isku-duwahaaga Fayoqabka wanaaga 299-6372 ext. 11210.
Ku xirida ilaha bulshada
Waxaan iskaashi la sameynnaa khubaro ka tirsan bulshadayada si aan u burburinno caqabadaha una xannaaneynno caafimaadka oo dhan, Oo ay ku jiraan:
Caawimaad xagga sharciga ah
Helitaanka farmashiyaha goobta - adeegsiga kaydka 340B si kor loogu qaado daryeelka bukaanka
Si aad uhesho agabyadan, wac xaruntayaga 717-299-6371.
Bixinta Howlaha & Barnaamijka Qiime dhimista Lacagta
In kasta oo Xarunta Caafimaadka Lancaster ay ka qaaddo khidmooyinka adeegyada daryeelka caafimaad ee aan bixinno, waxaa jira habab badan oo kala duwan oo lacag bixinta kuwaas oo adeegyadeenna ka dhigaya kuwo awood u leh bukaanka. Waxaan daryeeleynaa bukaanka aan laheyn caymis, caymiska ganacsiga, Medical Assistance * ama Medicare.
* Bukaanadu waxay uqalmaan Caawimaada Caafimaadka iyo Caymiska Suuqa haddii ay la kulmaan daqli, ilaha, iyo shuruudaha kale ee u qalmanaanta. Wixii caawimaad ah ee ku saabsan dalbashada Kaalmada Caafimaadka, CHIP, ama Caymiska Suuqa, fadlan wac 717-299-6371 weydiina inaad la xiriirto Waaxda Shaqada Bulshada.
Haddii aadan hubin haddii caymiskaaga caafimaad uu daboolayo adeegyadeena, fadlan soo wac 717-299-6371 weydiina inaad la xiriirto Qaybta Biilasha.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay isticmaashaa 340B keydin si kor loogu qaado daryeelka bukaanka
Barnaamijka daweynta daroogada ee loo yaqaan '340B program' waa barnaamij loogu talagalay in lagu caawiyo bixiyayaasha shabakadaha amniga ah, sida Xarunta Caafimaadka ee Lancaster, si ay u fidiso ilo wareedyo federaal ah oo sii yaraanaya iyo dib ugu soo kabashada daryeelka bukaanka. Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay isticmaashaa 340B keydin si loo hubiyo in bukaannada aan awoodin dawadooda ay wali heli karaan dawadooda iyagoo u maraya Sanduuqa Faa'iidada Feydaanka.
Shaqaalahayaga bulshada ayaa kaa caawin kara inaad codsatid Caawinaad Caafimaad ama CHIP waqti kasta ee sanadka. Haddii aad tahay qof weyn oo aadan tayo u lahayn Medical Assistance, waad uqalmi kartaa Caymiska Caafimaadka Suuqa. Haddii aadan u qalmin barnaamijyada ceymiska, shaqaalahayaga bulshada ayaa kaa caawin kara inaad codsatid barnaamijyada kaalmada isbitaalka ee deegaankaaga.
Intaa waxaa sii dheer, markii khibradaha nolol maalmeedka ay noqdaan kuwa caqabado leh, shaqaalahayaga bulshada ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan u diritaanka bangiyada cuntada, hoyga, gabowga, iyo adeegyada iinta. Wac 717-299-6371 ama weydii takhasus gaar ah oo bukaan socodka mid ka mid ah Goobahayaga si aad ballan uga sameysato shaqaale bulsho oo eegi kara u qalmiddaada barnaamijyada kala duwan.
Bukaannadu waxay kuxiran karaan Xarunta Caafimaadka ee Lancaster iyada oo loo sii maro Maqalka bukaanka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad codsato ballan, marin u hel macluumaad, oo aad kula xiriirto kooxda daryeelkaaga wakhti kasta.
Xuquuqda Bukaanka & Masuuliyadaha
Xarunta Caafimaadka Lancaster, hadafkeenu waa inaan ku kasbano sinaan adeeg daryeel caafimaad oo soo dhaweynaya, xoojinaya, isla markaana ka caawinaya bulshada oo dhan inay kor u kacaan. Iyadoo la ilaalinayo himiladeenna iyo ujeedkeenna, waxaan bixinnay Xuquuqda & Mas'uuliyadaha Bukaanka ee soo socda:
Jawaab-celisyada y Derechos de Pacientes